Argentina oo u soo baxday Wareega 16 ka ee koobka aduunka+VIDEO+SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Argentina oo u soo baxday Wareega 16 ka ee koobka aduunka+VIDEO+SAWIRRO
Xulka qaranka Argentina ayaa si cajiib ah ugu soo baxay wareega 16ka xul qaran ee koobka aduunka kadib markii ay waqtigii dhamaadka ciyaarta goolka guusha la yimaadeen si ay Nigeria u qalbi jabiyaan. Argentina ayaa kaalinta labaad kaga soo baxay Group D kadib markii ay 2-1 ku garaaceen Nigeria oo ilaa daqiiqadii 86 aad koobka aduunka u soo baxsanayd.
Lionel Messi ayaa goolka hore u saxiixay Argentina laakiin Victor Moses ayaa gool rekoodhe ah ku baraajeeyay balse Marcos Rojo ayaa goolkiisii saddexaad ee caalamiga ahaa taariikh ku sameeyay kadib markii uu xulkiisa ugu soo saaray wareega xiga.
Kaydka: Nahuel Guzman, Willy Caballero, Giovani Lo Celso, Maximiliano Meza, Paulo Dybala, Lucas Biglia, Eduardo Salvio, Cristian Pavon, Federico Fazio, Marcos Acuna, Sergio Aguero, Cristian Ansaldi.
Kaydka: Ikechukwu Ezenwa, Daniel Akpeyi, Alex Iwobi, Simy, Odion Ighalo, Tyronne Ebuehi, Abdullahi Shehu, Chidozie Awaziem, John Ogu, Elderson Echiejile, Joel Obi, Ogenyi Onazi.
DAQIIQADII 14 AAD Lionel Messi ayaa goolkiisii ugu horeeyay ee koobka aduunka Russia 2018 ka dhaliyay kulankan isaga oo xulkiisa Argentina siiyay dhiiro galin ay kaga baxeen cabsiyadii iyo niyadjabkii guuldaradii Croatia waxaana gool caawin cajiib ah Messi u sameeyay Banega iyada oo Messi laftiisu uu si qurux badan shaqadiisa u qabsaday wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Argentina hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
DAQIIQADII 27 AAD Lionel Messi ayaa fursad cajiib ah u abuuray Higuain laakiin goolhayaha xulka qaranka Nigeria ee Uzoho ayaa gool cadaan ah ka beeniyay xidiga Juventus iyada oo Uzoho daawayn loo sameeyay markii uu Higuain jilibka ku dhuftay intii uu kubbada baacsanayay.
DAQIIQADII 34 AAD BIRTA GOOLKA!! Lionel Messi ayaa ugu dhawaaday in uu dhaliyo goolkiisa labaad ee kulaknan kadib markii uu birta u garaacay Nigeria iyada oo kubbad uu Di Maria fursad ku helay uu qalad ku galay L. Balogun kaas oo kaadhka digniinta ah la siiyay isla markaana Argentina laaga xorta ah loogu abaal mariyay.
Xulka qaranka Nigeria ayaan qaab ciyaareed fiican muujin qaybtii hore iyaga oo waliba kubbada luminayay laakiin Argentina ayaan ka faa’iidaysan fursado dahabi ah oo ay ciyaarta qaybtii hore ugu guulaysan kareen.
Laakiin qaybtii hore ee ciyaarta oo ay Argentina soo bandhigtay qaab ciyaareed gabi ahaanba ka duwan sidii ay soo ahayd kulamadii la soo dhaafay ayaa 1-0 hogaanka kula soo nasatay iyada oo waliba markaas Croatia iyo Iceland ay barbaro gool la’aan ah ku kala nasteen waxayna wax walba u socdeen dhinaca Argentina.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Nigeria iyo Argentina haysteen fursad 45 daqiiqo ah oo ugu soo gudbaan wareega 16ka xul qaran ee koobka aduunka wuxuuna markan culaysku saarnaa Nigeria oo banaanka ka joogtay koobka aduunka maadaama oo gool looga hormaray.
DAQIIQADII 49 aad Mascherano ayaa farxadii xulka qarankiisa Argentina murugo u badalay kadib markii uu rekoodhe ku galay Etebo isla markaana uu garsooruhu ka hubiyay VAR waxayna Nigeria heshay fursad dahabi ah oo ay ciyaarta ugu soo laabto.
DAQIIQADII 51 AAD Victor Moses ayaa xulka qarankiisa Nigeria u saxiixay goolka barbaraha isaga oo aan wax qalad ah ka samayn rekoodhaha masuuliyadiisa uu garbaha u ritay isaga oo garaacay goolhayaha Argentina ee Armani oo kulankiisii qaranka ugu horeeyay ku saftay isaga oo 31 sano jir ah waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
Goolkan ayaa gabi ahaanba xaalada badalay waxaana markan wareega 16ka xul qaran u soo baxsanaa xulka Nigeria iyaga oo waliba war fiicana ka helay Croatia oo gool kaga hormartay Iceland waxayna xaaladu ku cuslaatay Argentina.
DAQIIQADII 61 AAD Tababaraha Argentina ee Sampaoli ayaa badalkiisii ugu horeeyay keenay wuxuuna ciyaarta soo galiyay Pavon isaga oo saaray Perez laakiin Nigeria ayaa qaab ciyaareedkeeda sare u soo qaaday qaybtii labaad si ay si xoogan ugu dagaalanto.
DAQIIQADII 72 AAD Markii ay ciyaartu ka soo rayn wayday Argentina ayaa badalkooda labaad sameeyay waxaana ciyaarta laga saaray Di Maria waxaana kaydka ka soo kacay Maximiliano Meza iyada oo wali Nigeria si adag natiijada u ilaashanaysay.
DAQIIQADII 76 AAD Ciyaartoyda Nigeria ayaa rekoodhe kale ku dooday kadib markii ay garsooraha u sheegeen in ciyaartoyda Argentina ahi uu kubbada gacanta ku taabtay laakiin markii uu garsooruhu ku laabtay VAR waxa uu go’aansaday in marka aanu rekoodhe ahayn.
Laakiin Nigeria ayaa markan noqotay kooxda laga filan karayay in ay goolka labaad keensadaan taas oo rajada yar ee Argentina u hadhsanayd dili karaysay iyada oo badaladii uu Sampaoli sameeyay ayna isbadalii uu doonayay samayn.
DAQIIQADII 80 AAD Sergio Aguero ayaa ciyaarta la soo galiyay si uu weerarka qarankiisa u xoojiyo waxaana la saaray Nicolas Tagliafico oo aan markan shaqo looga baahnayn mar haddiiba ay Argentina sidan ku hadhsanayd.
DAQIIQADII 81 AAD Higuain ayaa caadadiisii nasiib xumada ahayd sii watay isaga oo markan lumiyay fursad xulkiisa soo saari kartay kadib markii uu Rojo kubbad ka soo shaqeeyay wuxuuna Hiriguain seegay bartilmaameedka goolka.
DAQIIQADII 84 AAD Ighalo ayaa kubbad kula soo baxay goolka Argentina wuxuuna haysta fursada uu ciyaarta ku so xidhi karayay laakiin waxa uu si lama filaan ah ugu fashilmay in uu gaaraaco goolhaye Armani oo rajadii xulkiisa si layaableh u sii badbaadiyay.
DAQIIQADII 86 AAD Alla Maxay Waali Ahayd! Dhalin waaye waa loo dhaliyaa, markii Nigeria ay lumisay fursada ay ciyaarta ku soo xidhi kartay ee ay lumisay waxaa goolka wadnaha gooyay Nigeria ka dhaliyay Marcos Rojo kaas oo xulka qarankiisa Argentina siiyay fursad dahabi ah isaga oo caawin ka helay Gabriel Iván Mercado waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay Argentina waqti xaasaasi ah hogaanka ku soo ceshatay.
DAQIIQADII 90 AAD Nigeria ayaa kaydka ka soo kicisay Alex Iwobi si uu xulkiisa u badbaadiyo waxaana la saaray K. Omeruo waxaana la galay 4 daqiiqo oo dheeri ah oo dareen layaableh labada dhinacba ka bixinayay.
Labadii daqiiqo ee ugu danbeeyay Ahmed Musa oo hanjabadiisii ku fashilmay ayaa la saaray waxaana ciyaarta la soo galiyay Tochukwu Nwankwo laakiin ugu danbayn Argentina ayaa awooday in ayna Nigeria ciyaarta markale ku soo laaban waxayna ciyaartu ku dhamaatay 2-1 ay Argentina si layaableh ugu soo baxday wareega 16ka xul qaran ee koobka aduunka.
Xulka qaranka Croatia ayaa kaalinta kowaad kaga soo baxay Group D iyaga oo 2-1 ku garaacay Iceland waxanaa kaalinta labaad kaga soo baxay xulka qaranka Argentina oo 2-1 isna ku garaacay Nigeria oo koobka aduunka si qalbi jab ah uga hadhay.